Ise Mars nchoputa na gbanwee nghọta anyị nke red planet - News Ọchịchị
Ise Mars nchoputa na gbanwee nghọta anyị nke red planet
Isiokwu a na-akpọ “Ise Mars nchoputa na gbanwee nghọta anyị nke red planet” e dere site Alan Yuhas na New York, maka theguardian.com on Thursday 5th November 2015 21.15 UTC
Na a rover trundling n'elu red ala, a ugboelu mmiri site na ikuku na ìgwè na-arụ ọrụ niile gburugburu Earth, Mars nyere elu a eriri nke na nzuzo na-Nasa na afọ ikpeazụ. Lee ụfọdụ n'ime ihe ndị bụ isi na nchoputa nke 2015.
Liquid mmiri na Mars
Chọrọ ruo ọtụtụ iri afọ, ihe àmà nke mmiri na Mars n'ụzọ nkịtị pụta si na mbara ala na July, na-agba ọsọ ala omimi na ndagwurugwu ahụ mgbidi n'elu okpomọkụ oge. A Nasa otu hụrụ hydrated salts, a ise siga egbe maka mmiri mmiri mmiri, na anọ na saịtị ndị ahụ ebe gbara ọchịchịrị stains trickled ala Martian teren.
Nasa adịghị ma mara isi iyi nke briny downhill eruba, nke nwere ike bilie n'okpuruala ice ma ọ bụ dọta, ma ọ bụ ide ede nke ikuku. Gara aga ọzọ achọpụtala hints mmiri, gụnyere oyiyi nke ihe pụtara ịbụ obere iyi na ọbụna mmiri agbapụtara ala gullies, ma okpomọkụ chọpụtara e Itie dị ka ndị mbụ enen àmà na-egosi nke mmiri mmiri kasị ejikọta ya na ndụ.
Na-eme nnyocha nwere ogologo ẹkenịmde na mmiri mmiri mmiri bụ isi mgwa maka ndụ - Nasa si mantra na ọchịchọ bụ "na-eso mmiri" - ma ndị ọkà mmụta sayensị na-enwe ugbu a nsogbu n'ihi otú ichoputa iyi. The Ọchịchọ ịmata rover na enyoba Mars ruo afọ atọ bụ akpali mmasị, na nwere ike merụọ mmiri ebe na terrestrial chinchi na rapagidesiri na na ugboelu site na cosmos. The rover nwere ike ichoputa site n'ebe dị anya, na a laser nke ga-tụọ streaks, ma ọ bụ ọ pụrụ n'ihe ize ndụ na-eru nso iji kporo ụfọdụ apịtị.
Ihe ikuku yipụ site ifufe si anyanwụ
On Thursday, Nasa mara ọkwa a usoro nke Nchoputa Banyere Mars 'ikuku na ike inyere mmadụ aka idozi ihe omimi nke ihe mere Mars, nke ọtụtụ ijeri afọ gara aga bụ a mmiri, na-ekpo ọkụ na ụwa na ihe ikuku 100 ugboro thicker. Taa Mars bụ akọrọ, frigid na bombarded site radieshon - a ụwa na-enweghị ike ndọta na gburugburu ụwa na-echebe ya site explosions na anyanwụ.
Nchoputa si Nasa si Maven ugboelu, nke ruru Mars ikpeazụ ọdịda ichoputa ya mkpa ikuku, na-enyere ga-edozi omimi. Mission ọkà mmụta sayensị chọpụtara na anyanwụ oké ifufe, nke gbawara ike na ndọta eyi, warara pụọ ​​ahụ si ikuku nke Mars na ihe ịrịba ọnụego.
"Dị ka ohi nke a ole na ole mkpụrụ ego si a ndekọ ego ụbọchị ọ bụla, na ọnwụ na-aghọ ịrịba karịrị oge,"Kwuru Bruce Jakosky, Maven bụ isi investigator. Anyanwụ oké ifufe ndị ọzọ nkịtị na ufiop na mbụ na anyanwụ usoro akụkọ ihe mere eme, nke pụtara na ihe ndị na-anyanwụ nwere ike isi repercussions maka na mmiri na ikuku nke Mars.
The ozi nwekwara tụọ mejupụtara nke Mars 'ikuku nke oge mbụ ebe ndị Viking ọzọ 40 afọ ndị gara aga, na hụrụ a omimi ego nke ájá hovering n'elu na mbara ala. Na-eme nnyocha na-atụ aro na ọ pụrụ ịbụ interplanetary ájá - na w grains hapụrụ site comets na asteroids traversing usoro mbara igwe.
Ancient ọdọ mmiri
Na October, Nasa ọkà mmụta sayensị hụrụ na-egosi nke ọdọ mmiri nke gaara were ruo 10,000 afọ - ikekwe ruo ogologo oge ndụ ịzụlite na a-adọ mmiri odida obodo nke na-emighị emi iyi na deltas. Analysis nke sedimenti gosiri ọkà mmụta sayensị na mmiri na-asọpụta, ebu gravel na ájá ala n'ime gigantic Gale ndagwurugwu ahụ. Na etiti nke na ndagwurugwu ahụ na-anọchi a towering ugwu na-akpọ Ugwu Sharp, ya na ìgwè nke atọ na-kilomita nke sedimenti n'ígwé.
Na April, na ọchịchọ ịmata rover hụrụ ihe àmà nke mmiri mmiri mmiri n'okpuru elu nke Mars, na e dere okpomọkụ na oké ifufe ahụ fere na ndagwurugwu ahụ na ndị dị nnọọ ziri ezi n'ihi na mmiri mmiri brine. Nchoputa tụrụ aro na Martian ala bụ keguru mmiri na mmiri na nwere ike ịnọ mmiri mmiri ekele a nnu, calcium perchlorate, nke na-eme ya ọmụmụ ala banyere -70C.
Maven ọkà mmụta sayensị ahụ chọpụtakwara na anyanwụ ifufe na-emepụta Ẹkot ugwu ọkụ gafee sara bibiri akụkụ nke Mars, mere site elu-ike ahụ na-akpali akpali ihe ikuku echeghị echiche site a ndọta. Ụmụ mmadụ pụrụ theoretically ịhụ Martian auroras dị ka red, acha anụnụ anụnụ na green na agba na-ahụ anya ụdịdị dị iche iche, Ma NASA anaghị ma maara ihe ọkụ ike anya dị ka, ebe ya rovers enweghị ngwá ọrụ na-ahụ na ha.
The auroras na-atụ aro na ọtụtụ n'ime Mars na-eju ha anyanwụ ifufe, agbazinye àmà na-egosi echiche bụ na anyanwụ ihe so mee ka ọnwụ nke ikuku niile gburugburu uwa. Ụfọdụ magnetik n'ubi-anọgide na ngalaba nke jikọrọ ọnụ gbasasịa gburugburu uwa, ma na mbara ala nwetaghị global ọta na ọ dị mgbe o nwere.
23536	0 Alan Yuhas, Nkeji edemede, ọchịchọ ịmata Rover, Mars, NASA, News, Science, Space
← Amazon Fire HD 10 nyochaa: ịcha na-ezighị ezi na nkuku egosi a oké ọnụ ndudue Samsung Gear S2 review: -asa oge kechioma n'ihi na Korean ike si smartwatch →